Fonjan'ny vehivavy Antanimora - Aoka hafainganina ny fitsarana anay - Taratra 21 fevrier 2019 - Madagascar : la corruption au sein de la Justice illustrée par les articles de presse
Accueil Antanimora Fonjan’ny vehivavy Antanimora – Aoka hafainganina ny fitsarana anay – Taratra 21...
Fonjan’ny vehivavy Antanimora – Aoka hafainganina ny fitsarana anay – Taratra 21 fevrier 2019
Naneho ny alahelony. “Takinay ny hanafainganana ny fitsarana anay satria maro ireo efa notanana elabe tety. Ao koa ireo efa zokiolona nefa atao tsinontsinona amin’ny fihazonana azy. Maro ireo antontan-taratasy efa niakatra tany amin’ny fandravana didy nefa tsy misy tohiny. Ny sasany aminay, tsy meloka akory nefa tanana aty”, hoy ny solontenan’ireo vehivavy voafonja, teny Antanimora, omaly. Nohamafisin’izy ireo fa tsizarizary sy tsy ara-pahasalamana ny fonja. Eo koa ny hatereny. Ny tsy fahampian’ny fanafody… Namaly izany ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fitsarana, amin’ny alalan’ny tale kabinetra ka nilaza fa efa ao anatin’ny politikan’izy ireo ny hanafainganana ny fitsarana ireo voafonja. Eo koa ny fanatsarana sy fanavaozana ny fonja. Ny fanavaozana ny tontolon’ny fandraharahana ny fonja. Manampy ireo ny fijerena ny hiverenan’ireo voafonja eo anivon’ny fiaraha-monina.
Tsiahivina fa tonga teny an-toerana nitondra fanampiana ho an’ireto vehivavy voafonja ireto ny eo anivon’ny asa sosialy ao amin’ny fiadidiana ny Repoblika. Nanolotra vary amin’ny kipato maromaro sy voamaina ary koa koba aina izy ireo tamin’izany.
Samy nampanantena ny hijerena ny olan’ireo vehivavy voafonja ireo rehetra nandaha-teny.
Article suivantJustice populaire inquiétante à Madagascar.Il existe encore de nombreux cas où la justice s’achète – La gazette de la grande île 21 fevrier 2019
Madagascar – arrestations spectaculairement louches des revanchards – La gazette de...
La population malgache considère généralement que le système pénal est corrompu,...
Mpivady ny mpitsara sy ny solovava ny raharaha sokatra teo Toliary...